Epakati Voltage uye High Voltage Switchgears, China Yepakati Voltage uye High Voltage Switchgears Vagadziri, Suppliers, Fekitori - HNAC Technology Co., Ltd
Imba>Products Supplier>Yakazara Seti yeMechanical uye Magetsi Equipments>Medium Voltage uye High Voltage Switchgears
Iyo yakakwira-voltage yakazara seti yemidziyo inonyanya kushandiswa kutonga nekuchengetedza masisitimu emagetsi (kusanganisira zvidyarwa zvemagetsi, zviteshi, mitsara yekutapurirana uye yekugovera, maindasitiri nemabhizinesi emigodhi nevamwe vashandisi). Chikamu chemagetsi emagetsi kana mitsara inogona kuiswa mukati kana kunze kwekushanda zvinoenderana nezvinodiwa zvegridi kushanda, kana inogona kushandiswa kana iyo magetsi emagetsi kana tambo yakundikana, chikamu chinokanganisa chinobviswa nekukurumidza kubva mugetsi remagetsi, kuitira kuti chengetedza kushanda kwakajairwa kwechikamu chisina mhosva chegedhi remagetsi uye kuchengetedzwa kwemidziyo uye kushanda uye kugadzirisa vashandi.
Iyo yakaderera-voltage yakazara seti yemidziyo inoshandiswa zvakanyanya mukugovera magetsi, dhiraivha yemagetsi uye otomatiki kudzora michina yeakaderera-voltage masisitimu mumagetsi emagetsi.
Zvigadzirwa zvakatevedzana zvinoshandisa chikamu chechimiro musanganiswa seyakanyanya hurongwa. Zvose zvikamu zvekugadzirisa zvinogadziriswa nemakumbo. Mushure mekugadzira iyo yekutanga sisitimu, magonhi, baffle, clapboard, dhirowa, inokwirisa bracket, bhazi bar uye zvemagetsi zvikamu zvinogadziriswa sezvinodiwa kugadzira iyo yakazara switchgear;
Iyo framework inoshandisa rolled section. Yakamisikidzwa neatatu-dimensional board, uye yakabatana nebhaudhi, isina welding chimiro, kuitira kudzivirira welding deformation uye kushushikana uye kugadzirisa iko kuisirwa;
Yese chimiro chemukati chine galvanized, chimiro chekunze chinopfapfaidzwa ne static epoxy poda mushure mekunhonga uye phosphating kurapwa;
Nekushandisa kwemukati, kukwidziridzwa kwekushandisa saiti ≤ 2000m (pamusoro peiyi inogona kutaurirana);
Hunyoro hwehukama haufanire kudarika 50% pa +40 ℃, nepo pakudzika kwakadzika, hunyoro hwakakura hunogamuchirwa, semuenzaniso 90% pa +20 ℃. Tichifunga nezve shanduko yetembiricha imwe nguva inogona kukonzera condensation, avhareji yemazuva ese inofanira kunge iri pasi pe95% uye avhareji yepamwedzi isingasviki 90%.